အမှနျတရားအတှကျ တိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ မွနှငျးရညျလှငျကို ကြောကျပနျးခြီလေးရေးဆှဲပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတျတဈဦး
မွနှငျးရညျလှငျက တျောလှနျရေးကွီးမှာ ပွညျသူနဲ့အတူ အမှနျတရားဘကျကရပျတညျပွီး လမျးပျေါထှကျကာ လူထုလှုပျရှားမှုမှာ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ပါဝငျခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ အငျတိုကျအားတိုကျ ပွုလုပျတာကွောငျ့ ၅၀၅ က ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့အရေးယူခွငျးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှငျတှထေဲက တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ဘေးကငျးရာကို ရှောငျတိမျးပွီး လှတျမွောကျနယျမွေ တဈနရောကို ရောကျရှိနတေဲ့ မွနှငျးရညျလှငျကတော့ ရောကျရာနရောကနတေျောလှနျရေးတိုကျပှဲဆငျနှဲနသေူဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာတော့ မွနှငျးရညျလှငျက “Public Voice Television” ရဲ့အစီအစဉျတဈခုမှာ တျောလှနျရေးအသိပညာပေးပွီး ဝငျရောကျဆှေးနှေးခွငျးတှကေို လုပျဆောငျနတော ဖွဈပါတယျ ။ မွနှငျးရညျလှငျက နူးညံ့တဲ့မိနျးမသားတဈယောကျဖွဈပမေယျ့လညျး တျောလှနျရေးမှာ လကျနကျကိုငျပွီး ပါဝငျနတောဖွဈသလို စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျပွီး တောတောငျထဲမှာ ဒုက်ခမြိုးစုံကိုရငျဆိုငျနတောဖွဈပါတယျ။
အမှနျတရားအတှကျ တိုကျပှဲဝငျကာ အဝေးရောကျနတေဲ့ မွနှငျးရညျလှငျရဲ့ ကြောကျပနျးခြီလေးကို လှတျမွောကျနယျမွရေောကျ ပရိသတျတဈဦးက ကိုယျတိုငျရေးဆှဲပွီး သတိတရရှိနကွေောငျးကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
သူမက”မမကိုအရမျးလှမျးလို့သတိရခွငျးမြားစှာနဲ့…. ကြောကျပနျးခြီလေးရေးဆှဲထားတယျမမမွ.. အမွနျဆုံးပွနျတှခွေ့ငျနပွေီ…”ဆိုပွီး လူမှုကှနျယကျထကျမှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ လှတျမွောကျနယျမွတေဈနရောကနသေူမရေးဆှဲထားတဲ့ မွနှငျးရညျလှငျရဲ့ ပုံတူပနျးခြီလေးကို ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
မြနှင်းရည်လွင်က တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပြည်သူနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကရပ်တည်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်ကာ လူထုလှုပ်ရှားမှုမှာ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ပါဝင်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တိုက်အားတိုက် ပြုလုပ်တာကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးကင်းရာကို ရှောင်တိမ်းပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေ တစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ကတော့ ရောက်ရာနေရာကနေတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသူဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာတော့ မြနှင်းရည်လွင်က “Public Voice Television” ရဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ တော်လှန်ရေးအသိပညာပေးပြီး ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြနှင်းရည်လွင်က နူးညံ့တဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လည်း တော်လှန်ရေးမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီး ပါဝင်နေတာဖြစ်သလို စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး တောတောင်ထဲမှာ ဒုက္ခမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကာ အဝေးရောက်နေတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ရဲ့ ကျောက်ပန်းချီလေးကို လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက် ပရိသတ်တစ်ဦးက ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲပြီး သတိတရရှိနေကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သူမက”မမကိုအရမ်းလွမ်းလို့သတိရခြင်းများစွာနဲ့…. ကျောက်ပန်းချီလေးရေးဆွဲထားတယ်မမမြ.. အမြန်ဆုံးပြန်တွေ့ခြင်နေပြီ…”ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာ ရေးသားထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်မြောက်နယ်မြေတစ်နေရာကနေသူမရေးဆွဲထားတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်ရဲ့ ပုံတူပန်းချီလေးကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
အိမျခွေ ၁၅၀ စာအတှကျ အခွခေံစားသောကျကုနျမြားကို လှူဒါနျးပေးခဲ့တဲ့ ပရဟိတ မငျးသမီးခိုငျနှငျးဝေ